Famerenana sy famakafakana Xiaomi Mi4 | Androidsis
Fanadihadiana lalina momba ny Xiaomi Mi4 LTE, avo lenta amin'ny 300 Euros fotsiny
Androany dia manana voninahitra sy fahafinaretana mahatalanjona aho manolotra anao amin'ny famerenana vaovao na famakafakana tanteraka ny iray amin'ireo terminal Android izay nankafiziko indrindra niasa. Raha faritana manokana dia mitondra anao izahay anio famakafakana lalina momba ny Xiaomi Mi4 LTE, biby volontsôkôla tena izy amin'ny lafiny famaritana ara-teknika sy ny famaranana fananganana premium izay miaina mifanaraka amin'ny laharam-pahamehan'ny mpamokatra terminal Android malaza izay ao an-tsaintsika rehetra ary manilika anao ireo terminal izay ny mpijery ihany no afaka misafidy elitista be karama.
Este Xiaomi Mi4 LTE, mba hanomezana anao ny hevitra, dia terminal eo amin'ny haavon'ny LG G3, Xperia Z3 na koa ny Samsung Galaxy S5 hatramin'ny nanombohany tamin'ny daty nitovizany tamin'io farany io, na dia ny nitondra ny mpanjifa lavitra ny firenena matanjaka amin'ny "Ilay paoma manaikitra", noho izany ny fitoviana manaitra azy, amin'ny lafiny hatsarana sy famaranana, miaraka amin'ny Apple iPhone.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Mi4 LTE
2 Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Mi4 LTE
2.3 Processor sy GPU
2.6 Fitahirizana anatiny
3 Ny ratsy indrindra amin'ity Xiaomi Mi4 ity
5 Vidio Xiaomi Mi4 amin'ny vidiny tsara indrindra
Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Mi4 LTE
modely Mi4 LTE
Operating System Android 4.4.4 Kit Kat miaraka amin'ny fanavaozana ny Lollipop dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy sy ny mety hametrahana rafi-piasana roa hisafidianana amin'ny fiandohan'ny terminal - Tsy ho ela dia hanana rom miasa tanteraka amin'ilay Windows Phone 10 vaovao ahafahanao manana ny Android tsara indrindra sy Windows Phone amin'ny terminal iray.
efijery LCD "IPS 5" miaraka amina vahaolana FullHD 1920 x 1080 480 ppi sy fiarovana Corning Gorilla Glass3
processeur Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core amin'ny 2'5 Ghz
Fitahirizana anatiny 16/64 GB tsy misy slot fanitarana ho an'ny karatra microSD na dia misy aza ny toerana rehetra azo apetraka amin'ny fametrahana ny rindranasa satria ny fitadidiana ny fitehirizana anatiny dia tsy voazara.
Fakan-tsary Rear 13'1 megapixels miaraka amina aperture 1 Exmos RS CMOS sensor dia tafiditra ao anatin'ny flash LED sy horonantsary horonantsary 8K
Fakan-tsary aloha 8 Megapixels
Conectividad 2G-3G-4G-Bluetooth 4.0-Wifi-GPS sy aGPS
bateria Lithium 3080 mAh
fepetra X X 139.2 68.5 8.9 MG
lanja 149 gr.
vidiny 319'07 ao amin'ny igogo.es
Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Mi4 LTE
Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo tanjak'ity Xiaomi Mi4 hitantsika izany amin'ny endriny ivelany izay miorina eo a chassis aluminium izay manome antsika fahatsapana ny taha be indrindra amin'ny endriny mihoatra ny mitovy amin'ny Apple iPhone. Ny famaranana ny kalitao izay mendrika hanasongadinana ny fandrefesana azy tonga lafatra mba hiheverana azy io ho Smartphone fa tsy Phablet sy ireo zoro lafiny tsy misy misy azy izay manome azy famaranana kanto indrindra.
Raha ny efijen'ity Xiaomi Mi4 ity dia manana fiarovana izy Gorila fitaratra3 hiaro azy amin'ireo gorodona kely amin'ny fampiasana isan'andro. Tsara ihany koa ny manamarika ny hakitroky ny pixel isaky ny santimetatra izay mahatratra ny isa 480 ppp, ampiarahina amin'ny vahaolana FullHD Tsy azo atao mihitsy ny mamantatra pikantsary na ohatrinona ny fampitomboantsika ny sary, ny pejin-tranonkala na ny fijerena horonantsary.
Processor sy GPU
Momba ilay mpanodina Qualcomm Snapdragon 801, Quad Core mahery amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 2,5 Ghz sy ny azy Qualcomm Adreno 330 GPU, miaraka amin'ny efijery miaraka amin'ny vahaolana 1920 x 1080 teboka sy ny fahatsiarovany 3Gb RAM ampy kokoa, izy ireo dia mamorona fitambarana tonga lafatra ho an'ny fampisehoana mahatalanjona na dia ny filalaovana lalao izay mila loharanom-pahalalana marobe aza nefa tsy manimba ny fiainana bateria amin'ny fanatanterahana., izay ny Achilles ombelahin'ireto mpanamboatra ireto izay nisafidy ny hampidirina ny efijery miaraka amin'ny fehin-kevitra 2K, ny efijery izay, na dia apetraka amin'ny terminal aza miaraka amina fika mitovy teknika toa an'ity Xiaomi Mi4, ity, dia mahita ny ohatra LG G3, manapotika ny fizakantenan'ny ny bateria. Ka amin'ity lafiny ity, fahombiazana lehibe avy amin'i Xiamo rehefa misafidy efijery misy vahaolana FullHD, araka ny hevitro, dia ampy.
Raha ny momba ny fakantsarinao lehibe na aoriana Fanapahan-kevitra 13,1 megapixel, Tsara homarihina ny hafainganan'ny fakana sary ary koa ny famaritana lehibe sy loko mazava, izany rehetra izany miaraka amina fampiharana fakantsary mahatalanjona sy miasa, iray amin'ireo zavatra tsara indrindra nahafaly ahy nanandrana ny Android terminal, ataovy ity fitaovana ity ho fitaovana tsara ho an'izay mitady fitaovana miaraka amina fakan-tsary tsara nefa tsy mila mandany vola be amin'io.
Etsy ankilany manana ny firaketana horonantsary izay azontsika atao isika raketo horonan-tsary miaraka amin'ny vahaolana 2K, Misy koa iray amin'ireo mpampiorina sary tsara indrindra fa afaka nanandrana tamina terminal Android aho, tena tsara ka mamela antsika hanao rakipeo avo lenta na dia ny fampiasana ny safidy mba Zoom amin'ny horonan-tsary aza, safidy iray izay tsy hita ihany ny fantsom-bidy lafo vidy hafa toa ny hitanao. mivantana ao amin'ny horonantsary Review momba an'ity Xiaomi Mi4.
Ary farany, raha ny momba ny fakantsary eo aloha, dia fakan-tsary misy a Vahaolana 8 mpx izay hahafahantsika manao selfie na selfie, ireo izay lamaody tato ho ato, tena mahavariana.
Amin'ny lafiny tsara, ity Xiaomi Mi4 Tsy hoe io no zavatra tsara indrindra azoko andramana amin'ny Android avo lenta, satria ho ahy ny iray amin'ireo tsara indrindra dia tsy isalasalana fa ny feon'ny patanty an'ny HTC One M9, na dia etsy an-danin'izany dia manome toky anao aho fa io dia iray amin'ireo tratra.
Ny mpandahateny anatiny ao am-pototry ny feon'ny terminal mahery sy mazava ary mamela antsika hamela ny terminal amin'ny sehatra fisaka tsy misy fatiantoka ireo terminal hafa izay misafidy ny hametraka ny mpandahateny any aoriana.
Mba hamaranana ireo pitsipitsony hanasongadinana ity Xiaomi Mi4 ity, azontsika atao ny manasongadina ny ampahany amin'ny fahatsiarovany anatiny izay azo alaina ao amin'ny rafitra miasa hatramin'ny tsy manana partitions maharikoriko izay mametra ny habaka fametrahana ny rindranasa sy ny lalao. Ho fanampin'izany, Xiaomi dia iray amin'ireo orinasa mamela toerana tena misy ho an'ny mpampiasa aorian'ny fihenan-danja izay onenan'ilay rafitra miasa. Izany hoe, ohatra ity Xiaomi Mi4 16 Gb vitako ny nanandramana, amin'ny 16 Gb amin'ny fitehirizana anatiny tonga ato amintsika miaraka amin'ny efa ho 14 Gb maimaim-poana ho an'ny fampiasana sy ny fahafinaretana ho an'ny mpampiasa, indrindra 13,44 Gb afaka, marika ambonimbony toa Samsung noho ny maodelin'izy 16 Gb avelany maimaimpoana izahay amin'ny fampiasana sy fahafinaretana ho an'ny mpampiasa mihoatra ny antsasaky ny fahatsiarovana fitahirizana.
Ny ratsy indrindra amin'ity Xiaomi Mi4 ity
Mikasika ny fatiantoka an'ity Xiaomi Mi4, ny azontsika asongadina dia ny tsy ampidirina slot ho an'ny fanitarana fahatsiarovana anatiny ary ny azy batterie tsy azo esorina anatiny, teboka ratsy sasany izay, ohatra, ny fitehirizana anatiny dia azontsika omena miaraka amin'ny fampidirana fifandraisana USB OTG.
Mazava ho azy iray amin'ireo terminal Android tsara indrindra azontsika atao anio nefa tsy mamela ny tahirintsika ao anaty fanandramana. Fantsona iray misy fanohanana lehibe avy amin'ny fiarahamonina Android, izay ahitantsika Rom maro masaka, Root mora ary tsy very antoka ary koa ny tsy mampino Xiaomi politika fanavaozana ofisialy izay nanamafisana ny fanavaozana ofisialy mankany Lollipop, izay nataon'ny ho avy ny lalana amin'ny alàlan'ny kinova Miui vaovao.
Etsy ankilany, ilaina ihany koa ny manasongadina ny mety hisian'ny mora manaparitaka rafitra fiasa roa, ohatra Android sy Windows 10 vantany vao mivoaka hatramin'ny nanamafisan'ny Microsoft sy Xiaomi fa hanana Rom mifanentana amin'ity Xiaomi Mi4 ity izy.
€319 a €379
Mihoatra ny vidin'ny fifaninanana
Fanavaozana ny kinova Android vaovao
Fiarahamonina fampandrosoana Android tsara
Root nefa tsy very ny antoka ofisialy
Tsy manohana karatra fahatsiarovana
Bateria tsy azo esorina
Vidio Xiaomi Mi4 amin'ny vidiny tsara indrindra
Avy amin'ny fivarotana igogoes.com no ananantsika ny Xiaomi Mi4 amin'ny vidiny tsy mampino ary amin'ny fahatokiana rehetra fa an'ny antoka iray ofisialy herintaona. Ao amin'ny tolotra amidy 294 Euros fotsiny miaraka amin'ny kaody promo Mi4.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Fanadihadiana lalina momba ny Xiaomi Mi4 LTE, avo lenta amin'ny 300 Euros fotsiny
CHRISTIANZAO dia hoy izy:
Tena tsara. Francisco izay modely tena andian-tantara marina? . Ohatra LG2 D802 805 sns. HANDEHA IRAY ETO CHINA. WEB vitsivitsy azo atokisana. Misaotra mamaly
Valiny amin'i CRISTIANZAO
Nico dia hoy izy:
Finday misy kalitao / vidiny tena tsara, ny tatitra a 10 Francisco, arahaba avy any Barcelona.
Mamaly an'i nico
manova dia hoy izy:
Ankehitriny hitako ambony noho ny Oukitel, ary amin'ny vidiny mitovy:
Mamaly an'i Alter
Ahoana ny fomba hanongorana ny Xiaomi Mi4 nefa tsy hahafoana ny fiantohana ofisialy momba ny vokatra
Ny fikarohana amin'ny feo Google dia hampiasa ny toerana misy anao hahalalana ny sahan'ireo fanontanianao